Samee aquarium kuu gaar ah | Kalluunka
Markaad dooranayso aquarium-ka markasta ma ogaanno nooca ku habboon baahiyadeenna. Hadaad tahay a Qofka xiisaha leh ee 'DIY' waa suurtagal in la sameeyo aquarium kuu gaar ah, Laakiin tan aad ayey muhiim u tahay in la tixgeliyo dhumucda kiristaalo si loo iibsado, maaddaama cabbirka aquarium-ka ee kala duwan ay u dhigmaan cadaadisyo kala duwan oo biyo ah iyo, marka la eego, dhumucda dhalooyinka kala duwan.
Sidaa darteed, marka la sameynayo aquarium-ka waxaa lagama maarmaan ah in lala tashado miisaska la xiriira doorsoomayaasha dhererkooda, dhererkooda iyo dhumucda dhalada.
Way ku habboon tahay in la dul dhigo dabool muraayad ama saxan dusha sare ah aquarium-ka maxaa yeelay tani waxay ka hortageysaa uumi-baxa xad-dhaafka ah ee biyaha quraaradda waxayna u oggolaan doontaa joogtee heerkulka joogtada ah. Mawqifkeedu aad ayuu ugu habboon yahay inuu si tartiib ah u janjeedho, sidaa darteed biyaha uumiga u janjeedha dhammaantood isku jiho, dib ugu soo noqda quraaradda quraaradda.
Marka laga hadlayo cabirka Daboolka aquariumWaxaa lagugula talinayaa inay yeelato baaxad lamid ah aquarium-ka si ay ugu dul saarto, laakiin dhererkiisu waa inuu kayaryahay kan aquarium-ka si ay ujirto meel aan daboolnayn labada dhinacba. Meelkani waa lagama maarmaan si loo soo bandhigo fiilooyinka heerkulka, tubbada shaandhada iyo in la quudin karo kalluunka.
Haddii, dhinaca kale, aad rabto inaad si toos ah u iibsato si aanad wax u murgin, waxaa jira dhowr nooc, dhammaantood waxay leeyihiin gidaarado isku mid ah oo quraarad ah, oo leh dhumuc taas oo ku xiran hadba cabirkeeda, mugga biyaha ay ka kooban tahay iyo cadaadiska ay kristalku u adkeysanayaan.
Waxaa sidoo kale jira aquarium nooca orthopedic waa midka sida ugufiican ula qabsada shuruudaha muhiimka ah ee dhamaan noocyada kalluunka ee sida caadiga ah ku nool aquariums-ka guryaha. Sidaa darteed waa lagula talinayaa meesha ka saar ikhtiyaarka helitaanka aquarium-ka nooca muraayadaha ama caagagga kuwaas oo badanaa laga helo dukaamada khaaska ah qaarkood maadaama ay aad u liitaan madaama ay leeyihiin dusha yar ee hawada taabanaya ayna qalloocinayaan muuqaalka kore sababo la xiriira qaabka wareega.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » DIY Aquariums » Samee aquarium kuu gaar ah
Sida loo daaweeyo betta fish of parasites